रचनात्मक विज्ञापनको २० उदाहरणहरू क्रिएटिव अनलाइन
हामी एक सूचना युद्ध मा बस्छौं, सामग्रीको लगातार बमबारीमा। के तपाईंलाई थाहा छ कि हामीले एक दिनमा 3000००० विज्ञापन सन्देशहरू पाउँछौं? ती सबैको बिचमा फाटो प्राप्त गर्नु भनेको वास्तवमै गाह्रो काम हो, यद्यपि यो जनताको ध्यानाकर्षण गर्न अझ गाह्रो छ। त्यहाँ विज्ञापन अभियानहरू छन् जसलाई करोडपति लगानी आवश्यक छ, यो सही अर्थमा बनाउँदछ, संसारभरि सन्देश फैलाउनु ठीक सस्तो छैन। उच्च गुणवत्ताको सामग्री विकास गर्न पैसा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तर आवश्यक छैन। प्रायः यो एक विज्ञापन अभियानको प्रभावकारितामा निर्धारण गर्ने कारक मात्र होईन, त्यहाँ एक तत्व छ जुन अगाडि जान्छ र त्यो वित्तीय मुद्दाहरूको विवादमा पर्दैन।
त्यो तत्व रचनात्मकता हो, जुन सबै खगोलीय योगहरूको भन्दा माथि छ। एक क्रान्तिकारी विचारको ठूलो विज्ञापनमा महत्त्वपूर्ण विज्ञापन ठाउँ तिर्ने बिना नै प्रतिध्वनित गर्न सकिन्छ, तर जसले आफूलाई त्यस्तो विजेता घोषणा गर्न पर्याप्त शक्तिशाली विचार उत्पन्न गर्न सक्षम छ। एक लाख भन्दा बढी विज्ञापनहरू हामी प्रति वर्ष प्राप्त गर्छौं? कहिलेकाँही यो सहरी ठाउँ बदल्नको लागि पर्याप्त हुन्छ, थिएटरलाई बस स्टपमा लैजानुहोस्, सडकको बीचोमा उल्का पिण्डको प्रभाव पुनः सिर्जना गर्नुहोस् ... कुन कुरा तपाईंको दिमागमा कहिल्यै आएको छैन? यहाँ तपाईंसँग हडताल र प्रभावशाली विज्ञापन प्रस्ताव को संकलन छ कि कसैलाई उदासीन छोड्दैन। म आशा गर्दछु तपाईंले उनीहरूलाई रमाईलो गर्नुभयो!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » रचनात्मक विज्ञापनको २० उदाहरणहरू